Ya disponible la segunda beta de Android Pie para el OnePlus 3 y 3T | Androidsis
I-beta yesibini ye-Android Pie ye-OnePlus 3 kunye ne-3T ngoku iyafumaneka
Ngomhla we-Meyi 14, I-OnePlus ukwazisa ngokusesikweni i-OnePlus 7 Pro kwisiXeko saseNew York, i-terminal ethi, ngokutsho kwentloko yenkampani, iya kuthetha ngaphambili nasemva kwefoni ... Ngethamsanqa oko akuthethi ukuba ifemi iyabalahla abasebenzisi ngeetheminali ezindala.
Ndithetha nge-OnePlus 3 kunye ne-OnePlus 3T, iiterminal ozifumeneyo I-beta yesibini yezinto eziza kuhlaziywa kwi-Android PieNangona ngenqanaba lale nkqubo ihamba, asazi ukuba izokumilisela ekugqibeleni okanye ukuba kuvavanyo lwentsebenzo kwezi zixhobo zombini ukubona ukuba iyayivula okanye hayi.
Ayizukuba sisihlandlo sokuqala ukuba umenzi abhengeze uhlaziyo lweemodeli ezithile zesiphelo kodwa ekugqibeleni azihlaziywa. Isibhengezo solusungulo senziwe nguMphathi weMveliso yeHlabathi uManu J, ngokusebenzisa iiforamu zoluntu. Kweso saziso, umhla wokukhutshwa okulindelekileyo awuchazwanga.
Izizathu zokuba kutheni umvelisi waseAsia engekakhuphi uhlaziyo lwePie ye-Android ye-OnePlus 3 kunye ne-3T aziwa, kodwa ayivakali, kuba lo mvelisi unee-terminals ezi-6 kuphela kwintengiso namhlanje: 3, 3T, 5, 5T, 6 kunye no-6T. Ukongeza, abo babelana ngamanani, Ikwabelana kakhulu ngesixhobo sangaphakathi, ke uhlaziyo akufuneki lube nzima.
Yonke into ibonakala ibonakalisa oko ifemi izinze kwindawo yelungelo iphumelele kwiminyaka yakutshanje kwaye sele iqalile ukushiya iiitheminali ebezisemarikeni ixesha elide, intshukumo engayi kubakholisa abalandeli balomvelisi.
Ukuba uyinxalenye yale nkqubo ye-beta, kuya kufuneka uyikhumbule loo nto ngekhe uzifumane nge-OTA. Kuya kufuneka ukhuphele uhlaziyo kwaye ulufake ngesandla kwisixhobo sakho, inkqubo enokubonakala inzima kwaye ichitha ixesha kodwa iyakhawuleza kwaye ilula. Ewe kunjalo, yenza ugcino lwasemva kwexesha ukuba kukho into engaphumeleliyo kwinkqubo.
Khuphela i-beta yesibini ye-Android Pie ye-OnePlus 3
Khuphela i-beta yesibini ye-Android Pie ye-OnePlus 3T
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-beta yesibini ye-Android Pie ye-OnePlus 3 kunye ne-3T ngoku iyafumaneka